तिथि मेरो पत्रु »5तपाईं देखि डेटिंग सिक्न सक्छौं कुराहरू 50 ग्रे को Shades
प्रेम & सेक्स
5 तपाईं देखि डेटिंग सिक्न सक्छौं कुराहरू 50 ग्रे को Shades
पछिल्लो पटक अद्यावधिक गरिएको: सेप्टेम्बर. 23 2020 |3मिनेट पढ्न
आजसम्म ग्रे पचास Shades सुनेका? प्रचार सबै मानव यौन इच्छा र यो पूरा गर्न अद्वितीय र शरारती तरिका संग के छ, जबकि, एक गहिरो अर्थ वास्तवमा त्यहाँ छ. सम्भव हुन सक्छ? वास्तवमा, हो. यो पुस्तक इच्छा चित्रण गरिएको छ, आकर्षण, मानव मनोविज्ञान माध्यम र रोमान्टिक प्रेम. वास्तवमा, यो वास्तवमा एक डेटिङ बाइबल रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ. कौतूहल? ग्रे पचास Shades डेटिङ र सम्बन्ध बारेमा प्रवचन सक्ने विभिन्न तरिकाहरू मा पढ्नुहोस्.
पाठ #1: एकल-दिमाग ध्यान
मसीही, मुख्य पुरुष चरित्र, Anastasia चाहनुहुन्छ, नायिका. उहाँले आफ्नो उद्देश्य धेरै कुरा स्पष्ट हुन्छ. अन्य खूबसूरत महिलाहरु चित्र प्रवेश गर्दा उहाँको ध्यान र यौन ऊर्जा dissipate छैन. उहाँको एकमात्र ध्यान Anastasia र Anastasia मा मात्र.
समाज मानिसहरू एक महिलालाई अस्पष्ट चासो दिन लागि यो ठीक छ कि भन्छन् यो ध्यान विशेष गरी आजकल धेरै महिला गर्न धेरै चूर छ. पूर्ण आँखा सम्पर्क अलमल्याउने नष्ट गर्न र दिएर आफ्नो मिति पूर्ण ध्यान दिनु तपाईं क्षण साँच्चै हो कि आफ्नो सम्बन्ध र शो अझ प्रगाढ मदत गर्नेछ.
पाठ #2: प्रेरित र Intentionality
सधैं आफूलाई नियन्त्रणमा, मसीही क्षमता र कौशल को एक विस्तृत श्रृंखला विकास मा समय र प्रयास लगानी गर्ने निर्णय. उहाँले पनि निरन्तर चुनौती र एक व्यक्तिको रूपमा आफूलाई सुधार गर्न तरिकामा खोज्नुहुन्छ, त्यो कुनै कुरा यो थियो कसरी चुनौतीपूर्ण मसीही संग उसलाई साक्षात्कार पूरा गर्दा Anastasia गर्दछ जस्तै.
यो असम्भव लाग्न सक्छ, सफल भएका त्यहाँ बाहिर पुरुष र महिला छन्, बौद्धिक, र शारीरिक र भावनात्मक फिट. दैनिक वृद्धि र चुनौतीहरू माध्यम उद्देश्यपूर्ण जीवन बिताएर, तपाईं मनसायले यस्तै साथी आकर्षित गर्न नेतृत्व गर्नेछन् आफ्नो सबै भन्दा राम्रो आत्म बन्न सक्छ.
पाठ #3: इच्छुक खतरा हुन
मसीही दुरुपयोग र आघात भरिएको जीवन बिताएँ बाँचिरहेका आफ्नै हातमा सबै कुरा लिन र सफल ध्यान केन्द्रित गर्न. उहाँले सुरुमा बन्द बन्द प्रकट गर्दा, उहाँले बिस्तारै आफ्ना भावनात्मक संसारमा Anastasia अनुमति दिन्छ र उनको निको अनुमति दिन्छ रूपमा मसीही चरित्र मनमोहक हुन्छ.
Anastasia, निर्दोष र आत्म-चेतना भरिएको जबकि, वास्तवमा त्यो मसीही चाहनुहुन्छ फैसला कि. अनि आफ्नो संसारमा उनको पूर्ण अज्ञात र नयाँ छ, जबकि, तिनले उसलाई र आफ्नो जीवनशैली अँगाल्छ.
किनभने समाज र देखाउने भावना कमजोरी अर्थ भन्ने धारणा को, यो देखाउन हेयको दृष्टिले हेर्थे छ. तर वास्तविकता, भावना देखाउने वास्तवमा बलियो कुराहरू एउटै छ. अनि तपाईं साँच्चै ख्याल र भरोसा यी भावनाहरू देख्न गर्ने अर्को व्यक्ति दे आदर र सम्बन्ध अझ प्रगाढ गर्न अनुमति दिन्छ.
पाठ #4: निर्णायक
उहाँ साँच्चै आफूलाई थाह किनभने मसीही उहाँ को हुनुहुन्छ थाह छ र उहाँले उच्च स्तर माथि बिताएर जीवनको बाहिर चाहनुहुन्छ र. उहाँले Anastasia चाहनुहुन्छ कि फैसला, यो वास्तवमा केही अर्थ.
दृढ निर्णय, भावुक भएको र यो देखाउने, लगातार आफ्नो साथी गर्न सञ्चार अलावा आफ्नो तिथिहरु प्रमुख बलियो मनसाय राखिदिनु मदत गर्छ. यो तपाईं केवल चाहन्थे र इच्छा हो भनेर थाह सधैं राम्रो छ.
पाठ #5: प्रेम, माया, र Unapologetic यौन इच्छा
Predictability यौन इच्छा गर्न मृत्यु छ. जब मसीही स्पैंकिंग छैन, पिटाइ खाएपछि, वा Anastasia माथि सुन्ने, उहाँले पकड छ, caressing, र चुंबन. मसीही बलियो छ, नरम, आक्रामक, र गुलियो सबै जबकि unapologetically Anastasia चाहने. अनि बारी मा, Anastasia प्रेम र उनको लागि आफ्नो ध्यान र अनियन्त्रित आवश्यकता लालसा गर्न सिक्छन्.
यौन खोज र प्रयोग आफ्नो सम्बन्ध अझ प्रगाढ मदत गर्नेछ. प्रेम, बधाई, र बस आफ्नो साथी खुसी शो बनाउन चाहने तपाईं कति हेरचाह. प्रमुख तपाईं हुन चाहन्छु किनभने तपाईं एउटा राम्रो साथी हो भनेर देखाउने छ.
ग्रे पचास Shades देखि यी learnings तपाईं एक सपना साथी आकर्षित वा आफ्नो पहिले नै जल्दोबल्दो सम्बन्ध अझ प्रगाढ मदत गर्नेछ.
6 महत्त्वपूर्ण कुराहरू पुरुष सेक्स समयमा बारे सोच्नुहोस्
पांच प्रश्न अनलाइन Daters सुनिरहेका को थकित छन्